मानव जीवन र मनोविज्ञान : भ्रम र यथार्थ | Nepal Flash
असार ०२, २०७८, बुधबार
मानव जीवन र मनोविज्ञान : भ्रम र यथार्थ
समाजभित्र विभिन्न किसिमका समूह हुन्छन् । समूहभित्र फरकफरक सोच भएका मानिसहरू हुन्छन् नै । कोही हुन्छन् आफ्नो वास्तविकता स्वीकार गर्न नचाहने हुन्छन् । उनीहरू आफ्नो वास्तविकता बुझ्नै खोज्दैनन् । यथार्थ स्विकार्नै सक्दैनन् । मानव मनोविज्ञानमा यसलाई डिनायलिजम भनिन्छ । डिनायलिजम भनेको वास्तविकतालाई अस्वीकार गर्न व्यक्तिले अप्ठ्यारो सत्यलाई हटाउनको लागि रचेको मनोवैज्ञानिक हो ।
कतिपय मानिस आफ्नो नकारात्मक पक्ष लुकाउन यथार्थ स्वीकार नगरी सम्बन्धित विषयवस्तुलाई ढाकछोप गरेर आफूलाई अब्बल पुष्टि गराउन खोज्छन् । यसो गर्दा क्षणिक खुसीमात्र मिल्ने हो । समयान्तरसँगै त्यस्ता व्यक्तिमा नकारात्मक प्रभाव देखिन थाल्दछ ।
कहिलेकाहीँ जीवनमा हामी विभिन्न किसिमको परिस्थितिमा गुज्रिरहेको हुन्छौँ, जुन हामी परिवर्तन गर्न सक्दैनौँ । तैपनि हामी आफ्नो समस्या लुकाएर वास्तविकताभन्दा पर बसेर आफ्ना कमजोरी लुकाउन प्रयत्न गरिहाल्छौँ । कतिपय मानिस आफ्नो नकारात्मक पक्ष लुकाउन यथार्थ स्वीकार नगरी सम्बन्धित विषयवस्तुलाई ढाकछोप गरेर आफूलाई अब्बल पुष्टि गराउन खोज्छन् । यसो गर्दा क्षणिक खुसीमात्र मिल्ने हो । समयान्तरसँगै त्यस्ता व्यक्तिमा नकारात्मक प्रभाव देखिन थाल्दछ ।
अर्को अवस्था हो कट्टरपन्थी स्वीकृति । त्यहाँ विवेक हुन्न । अरूको कुरा वा आफ्नो यथार्थ सहजै रूपमा हामी अनुमोदन गर्न सक्दैनौँ । कट्टरपन्थी स्वीकृति भनेको नियन्त्रणभन्दा बाहिरको परिस्थितिहरूमा पनि आफ्नो वास्तविकतालाई पूर्ण रूपमा स्विकार्नु पनि हो । तर यसरी सहज रूपमा अनुमोदन गर्न हामी किन कठिन महसुस गर्छौ त ?
हामी आफ्नो कमजोरी के को आधारमा स्वीकार वा अस्वीकार गर्छौँ ? यो अझै अनुसन्धान विषय नै हो । यसबारे धेरै खोज भइरहेका छन् । मानव जातिको एउटा कटु यथार्थ आफ्नो राम्रो पक्ष मात्र अगाडि देखाउनु हो । हामी आफूलाई सधैँ सत्य र साँचो देखाउँछौ । तर वास्तविकता हामी आफैँमा लुकेको हुन्छ । अरूको मूल्यांकनले हामीलाई कमजोर देखाउँछ । हामी आफ्नो कमजोरी र गल्ती लुकाउन अनेकन् ढाकछोप गर्न पछि पर्दैनौँ । हामीले जस्तो महसुस गर्छौँ, त्यसैलाई शाश्वत सत्य मान्छौँ । यसको मतलब यो होइन कि हामी आफ्नो कुरा सहज रूपमा स्वीकार गरिहाल्छौँ । र यो पनि होइन कि हामी आफ्नो परिस्थितिलाई सजिलै अनुमोदन गर्दछौँ ।
उदाहरणका लागि, एक विद्यार्थीले परीक्षाको लागि राम्रो तयारी गरेको थियो । अनि उसको बुझाइमा परीक्षामा राम्रो भयो । तर परिणाम त्यसबमोजिम आएन । अपेक्षाविपरीत परिणाम उल्टो हुन गयो ।नतिजा राम्रो आएन । यस्तो अवस्थामा ऊ कसरी परीक्षाको परिणाम स्वीकार गर्छ ? मलाई लाग्छ कि यो स्थितिलाई धेरैले सहज रूपमा स्वीकार गर्न गाह्रो हुन्छ । यस्तो अवस्था सबैको लागि समान खालको हुन्छ ।
मानिसभित्र रहेका कुण्ठा, निराशा र हारलाई स्वीकार गर्दा मानसिक रोग र आत्महत्याको समस्याहरू पनि कम गर्न सकिन्छ ।
आफ्नो परिस्थिति, विचार, भावना आफूसँगै हुन्छ । अरूलाई आफूभित्र लुकेका तरङ्गहरूको क्रियाको प्रतिबिम्ब बुझाउन कठिन पनि हुन्छ । यसो भन्दैगर्दा हामी आफ्नो वास्तविकता कतै लुकाइरहेका त हुँदैनौँ ?! बुझ्न कठिन हुन्छ र समस्याको समाधान गर्न त्यतिकै जटिल । तर यो त्यो हो, त्यो यो हो भनेर स्वीकार गरेर हामीले आफ्नो समस्यालाई कम गर्न पनि त सक्छौँ । यसो गर्नाले हामी आफ्नो समस्याहरूभन्दा अगाडि रही निष्कर्षतर्फ लम्कन सक्छौँ ।
- अनुसन्धानकर्ता र विज्ञहरूको अनुसार, कट्टरपन्थी स्वीकृतिको अभ्यास गर्दा हामीभित्र भएको लाज, दोष र चिन्ता कम गर्न सकिन्छ ।
- मानिसभित्र रहेका कुण्ठा, निराशा र हारलाई स्वीकार गर्दा मानसिक रोग र आत्महत्याको समस्याहरू पनि कम गर्न सकिन्छ ।
- आफ्नो परिस्थिति र यथार्थ स्वीकार गर्दा हाम्रा कष्टहरू कम हुन्छन् । नकारात्मक विचारहरूको बीउ पलाउने ठाउँ कम हुँदै जान्छ ।
वास्तविकता स्विकार्न सक्दैनौँ ?
किनकि यसले वास्तविक समयमा भइरहेको भावलाई प्रत्यक्ष बनाउँछ । जसले हाम्रा मूल्यमान्यता परिवर्तन गर्दछ । जसमा हाम्रो जीवनको अधिकांश हिस्सा भर परेको हुन्छ । यसले हामीलाई चोट पुर्‍याउँछ र हामीलाई असहज बनाउँछ । यद्यपि जुन छोटो समयावधिको लागि हो, तर हामी चोट स्वीकार गर्न सक्दैनौँ ।
हामी हाम्रो वास्तविकतालाई स्वीकार नगर्नुको सम्पूर्ण कारण यही हो । र हामी हाम्रो जीवन आफ्नै विश्वास र कल्पनामा निर्वाह गरिरहेको हुन्छौँ ।व्यक्ति प्राय आफ्नो सोच र विचारहरूलाई छोटो अवधिका अनुभवहरूमा केन्द्रित गर्दछन् । अनि मूल्याकंन चाहिँ लामो अवधिका नकारात्मक अनुभवहरूलाई जोडेर गर्दछन् । उनीहरू सोच्दछन् कि यो परिस्थितिले अहिल्यै उनीहरूलाई चोट पुर्‍यायो भने उनीहरूलाई सधैँ त्यो परिस्थितिको सम्झनाले दुख दिइरहने छ । जुन धेरै अर्थमा भ्रामक छ । यसले तिनीहरूलाई मान्छेहरूको न्याय, गलत निर्णय र कहिलेकाहीँ आत्महत्या गर्ने अवस्थामा पनि पुर्‍याउँछ ।
महत्त्वपूर्ण पक्ष त मानिसहरूले वास्तविकतालाई स्वीकार नगर्नुको कारण डर हो । धेरैले सोच्छन् कि यथार्थ स्वीकार गरे उनीहरूलाई मूर्ख बन्ने वा बनाइने छन् । त्यस्तो बुझाइ गलत हो । मानिसलाई आफूभित्र भएको भयले यथार्थ स्विकार्न दिँदैन । जुन वास्तविकता स्विकार्नु र केही समयको लागि मूर्ख जस्तो देखिनुभन्दा बढी मूर्खता हो ।
सकेसम्म नियमित वा शरीर र आवश्यकताका आधारमा योग गर्नुपर्छ । योगले हाम्रो दिमाग र शरीर दुवैलाई फाइदा गर्दछ । हामीले व्यक्तिगत स्वच्छतामा ध्यान दिनुपर्छ ।
स्विकार्नु वा स्वीकृति के हो ? र यसलाई हाम्रो जीवनमा कसरी ल्याउने ? अधिकांश व्यक्तिहरूले स्विकार्नु वा स्वीकृति भन्नाले, आफ्नो वास्तविकता स्विकार्नु हो भनेर सम्झन्छन् । जुन सम्बन्धित व्यक्तिको पक्षमा हुन पनि सक्छ र नहुन पनि । जीवनमा अगाडि बढ्न हामीले हाम्रो वास्तविकता स्विकार्नुपर्छ ।
वास्तविकता स्वीकार्न सुझाव
आफ्नो वास्तविकताविरुद्ध लड्दै गर्दा अत्यन्तै ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ । सर्वप्रथम वास्तविकता स्वीकार गर्नु नै आफूभित्र जागरूकता प्राप्त गर्नु हो । जसले आफूभित्र भएको असहजपनलाई कम गर्न मदत पुर्‍याउँछ । हामी आफूभित्र धेरै प्रश्न उत्तर गरिरहेको हुन्छौँ । जुन समाधान गर्न निकै कठिन भइरहेको हुन्छ । उच्च नैतिक स्तरको व्यवहार देखाउने क्रममा आफ्नो मर्यादा र भुलहरू बिर्सने गरिन्छ । त्यसले आफूलाई नकारात्मक प्रभाव परेको हुन्छ । कहिलेकाहीँ व्यावहारिक परामर्शको खाँचो अत्यन्तै हुन्छ । र, बेलाबेला परामर्श व्यावहारिक व्यक्तिसँग लिनुपर्ने हुन्छ ।
विगत अपरिवर्तनीय हुन्छ । बितिसकेका कुराहरूबारे हामीले आफैँले आफैँलाई सम्झाउनु पर्छ । यो कटु सत्य भुल्नु हुँदैन । भइसकेको गल्ती भइसक्यो । अब त्यो गल्तीबाट पाठ सिक्ने हो । त्यसमा जकडिने वा अल्झने होइन । यसतर्फ विचार पुर्‍याउन सकेमा हामीलाई वास्तविकतासँग जोडिन सहज हुन्छ । यो काम चुनौतीपूर्ण हुन सक्छ । तर असम्भव होइन । आफूलाई नियन्त्रण गर्न सक्यौँ भने हामी हाम्रो ऊर्जा अन्य समस्याको समाधानतिर लगाउन सक्षम र सफल हुन्छौँ ।
सकारात्मक सोच तथा नकारात्मक भावमुक्त
सोचाइको सीमा हुँदैन । मानिस सुतेको बेला पनि दिमाग सक्रिय भइरहेको हुन्छ । तसर्थ हाम्रा भावनाहरू कहिलेकाहीँ आफ्नो नियन्त्रणमा हुँदैनन् । र, भावनाहरू दैनिकीको काम अनि सोचाइअनुसार डुलिरहेको हुन्छ । कहिलेकाहीँ हामी सानो सानो कुरामा रिसाउने गर्दछौँ । कुनैबेला सानो विषयमा पनि खुसी हुन्छौँ । यो पनि अभिव्यक्ति हो ।
आफ्नो भावना सकारात्मक र बलियो बनाउन हाम्रो दैनिकीमा भएका समय र घटनाक्रम विचार गर्नाले पनि एउटा मुख्य भूमिका खेल्ने गर्छ । यदि हामीले नकारात्मक भावना बढी लिएमा व्यवहार पनि त्यस्तै हुने गर्छ । त्यसो गर्दा नकारात्मक प्रतिक्रियाहरू विस्तारित हुने गर्छन् । जब हामी हाम्रो भावना स्वीकार गर्छौँ । तिनीहरूलाई बिना आग्रह अनुभव गर्न सक्यौँ भने सकारात्मक भावलाई बलियो बनाउन सक्षम हुन्छौँ ।
यथार्थ स्वीकार गर्ने नाटक
हामी अझै वास्तविकतालाई पूर्णरूपमा स्वीकार गर्न संघर्ष गर्दै छौँ भने हाम्रो सोचलाई एकछिन तटस्थ रूपमा एकीकृत गरौँ । यसो गर्दा हामीले फेरि एकपटक राम्रोसँग सोच्ने समय पाउने छौँ । हाम्रो तितो अनुभवलाई केवल एउटा विचार जसरी स्वीकार गर्‍यौँ भने एकपछि अर्को प्रतिक्रिया के हुन्छ ? हामी हाम्रो व्यवहार र कार्यहरू परिवर्तन गर्दै बहाना मात्र प्रतिबिम्बित गर्‍यौँ भने हाम्रो विचारलाई बदल्न सक्छौँ ।
शरीरप्रति ध्यान र आराम
हामी तनावग्रस्त छौँ । आफ्नो अवस्थाको वास्तविकताविरुद्ध धकेल्दै छौँ । त्यस्तोबेला हाम्रो शरीर पनि तनावग्रस्त हुन्छ । यो प्राय: प्रतिरोधसँग सम्बन्धित हुन्छ । हाम्रो दिमागलाई उच्च सतर्कमा राख्दछ । हाम्रो शरीर आराम गर्नाले हाम्रो मांसपेशीहरूलाई आराम मिल्छ । र, आनन्दको अनुभूति हुन्छ । यसबाट सोच्ने शक्ति पनि वृद्धि हुन्छ । अनि हामी आफ्नो वास्तविकता के हो भनेर सोच्ने मनासिब समय निकाल्न सक्ने छौँ ।
सकेसम्म नियमित वा शरीर र आवश्यकताका आधारमा योग गर्नुपर्छ । योगले हाम्रो दिमाग र शरीर दुवैलाई फाइदा गर्दछ । हामीले व्यक्तिगत स्वच्छतामा ध्यान दिनुपर्छ । प्राय नुहाउने, सफा लुगा लगाउने र वरिपरिका ठाउँ सफा राख्ने आदि आदि । हामो सास फेर्ने प्रणाली पनि ख्याल गर्नु पर्छ । जस्तै, गहिरो सास फेर्ने र बिस्तारै छोड्ने । व्यायाम वा आराम गर्न र कहिलेकाहीँ सम्पूर्ण शरीर मसाज गर्ने ।
सामना गर्न सक्ने भनाइ वा व्यवहार प्रस्तुत
यो आचरणसँग जोडिएको सवाल पनि हो । आफूले सामना गर्न सक्ने विषयमात्र उठाउनु पर्छ । हाम्रो बोली-बचन र व्यवहार पनि आफूले धान्न सक्ने हुनुपर्छ । हामी केवल एक कुरामा ध्यान दिन सक्छौँ वा हामी आफ्नै लामो सूची बनाउन सक्छौँ । केही उदाहरणहरू: यो के हो ? जुन यो हो ? पहिले नै भएको घटनालाई म परिवर्तन गर्न सक्दिन । म चीजहरू त्यसरी नै स्वीकार गर्न सक्छु । म केवल मेरो आफ्नै कार्य र प्रतिक्रियाहरू नियन्त्रण गर्न सक्छु । यदि यसले मद्दत गर्दछ भने- नोटमा आफ्नो कथनहरू लेख्नुहोस् र बेलाबेलामा पल्टाएर पढ्नुस् ।
कट्टरपन्थी स्वीकृति कठिन हुन्छ । जुन हामीले नियन्त्रण गर्न गाह्रो हुन सक्ने र कठिन परिस्थितिको खुलेर सामना गर्न मद्दत पुर्‍याउने प्रकटन पनि हो । खुलेर अनुमोदन गर्नु आफ्नो विचारलाई आफैँमा एउटा शुद्ध उदाहरण हो । तर सजिलै स्मरण आउन पहिला यसले केही समय लिन सक्दछ । साना परिस्थितिहरूमा यो प्रयास गरेर सुरु गर्न कोसिस गर्नुपर्छ । जस्तै जब तपाईँ ट्राफिकमा अडिनुहुन्छ, त्यतिबेला आफूले स्वीकार गर्न सक्नुपर्छ ट्राफिक सबैको लागि उस्तै हो । त्यसले सबैको समय लिएको हुन्छ । मेरोमात्र समय खेर गएको होइन । यसरी आफ्नो र अरूको समस्या अनुभूति गर्दै सामना गर्नुपर्छ । दैनिकजसो कट्टरपन्थी स्वीकृति अभ्यास गर्दा समस्याको सामना गर्ने क्षयमा वृद्धि हुँदै जान्छ । यिनै प्रक्रिया प्रयोग गर्न सजिलो हुनेछ । जब ठूला र कठिन चुनौतीहरू तपाईँको मार्गमा आउँदछन्, त्यस्ता तगारा पन्छाउन तपाईँ कुशल र निपुण बन्नु हुनेछ ।
#चेतन खड्का #मनोविज्ञान
लेखक मनोविद् हुन् ।
अपडेटः २० सेकेन्ड अघि विस्तृतमा हेर्नुहोस् »
चीनको शाङ्सीमा खानी दुर्घटनामा ११ जनाको मृत्यु
इजरायलद्वारा गाजामा हवाई आक्रमण
गण्डक ब्यारेजमा पानीको सतह खतरा भन्दामाथि, २० गाउँ डुबानको जोखिममा
नारायणी नदीमा पानीको सतह इतिहासकै उच्च विन्दुमा
पहिरोले जयपृथ्वी राजमार्ग अवरुद्ध
आज पनि धेरै स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना
स्वास्थ्यलाई प्राथमिकता दिन गण्डकी प्रदेश जिल्ला सभापतिहरूको माग
#कोरोना #मृत्यु #फुटबल #नेकपा एमाले #पक्राउ #गण्डकी प्रदेश #जल तथा मौसम #बाढी पहिरो
धनसम्पत्ति कि जीवनको सार्थकता !
३ दिन अघि
स्थानीय तहको क्षमता स्वमूल्याङ्कन पद्धतिमाथि उठेका प्रश्न
जेठ २२, २०७८
बेलैमा मरेछौ, ठिकै गरेछौ, बाबा !
जेठ ०५, २०७८
कोभिड, मानसिक स्वास्थ्य र स्नेहको महत्त्व
जेठ ०४, २०७८
मार्केटिङ म्यानेजर: संजय पराजुली
इमेल: mkt@nepalflash.com, sanjayparajuli@gmail.com